‘कमरेड’को रूसी भाषामा के अर्थहुन्छ ? - Jhilko
‘कमरेड’को रूसी भाषामा के अर्थहुन्छ ?
हलिउडका सिनेमाहरूमा खराब सोभियतहरूलाई एक अर्कासँगको कुरोकानीमा सम्बोधन गर्दा ‘कमरेड’ भन्ने गरेको पाइन्छ ।
रूसीमा भाषामा कठिनाइ साथ उच्चारण गरिने शब्द‘ तोवारिस’ हो ।
‘तोवारिस’को अर्थ के हो र यो कहिले देखा प¥यो त ?सन् १९१७मा रूसी क्रान्ति भयो ।जारवादी रूसमा प्रयोग गरिएका सम्बोधन सूचक शब्दहरू पुराना भए ।
प्रचलनमा आउन छोडिने भो । रूसमा मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्ने एक किसिमको जटिल प्रक्रिया थियो ।
कुलीन पुरूष र महिला, सरकारी कर्मचारी र सैनिक अधिकारी, सम्मानित साहुमहाजन र पुजारीहरूलाई सम्बोधन गर्दा उनीहरूको हैसियत र पदका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो ।
यसरी सबैलाई सम्मानजनकरूपमा महोदय र महोदयाजस्ता शब्दको उपयोग गर्नुपर्ने थियो ।
तर शहरमा बस्ने आम मानिस र किसानहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुनै शब्द थिएन् ।
यसरी सम्बोधनका विभिन्न विधिहरूलाई रूसी समाजको असमानतालाई दर्शाइरहेको थियो । बोल्शेभिकहरू त्यहाँ परिर्वतन चाहन्थे ।
रूसको क्रान्ति हुन अघि फ्रान्सेली क्रान्तिले भाषा परिवर्तन ग¥यो । सन् १७८९मा फ्रान्सको क्रान्तिका क्रममा कुलीनतन्त्र समाप्त भयो ।
मुक्त मानिसलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ शब्दको विकास भयो । त्यो थियो ‘सिटिजन’ जसलाई अहिले नेपालीमा नागरिक शब्द अनुवाद गरिएको छ ।
अझ फ्रान्सका पूर्व राजाहरूलाई पनि नागरिक शब्दले सम्बोधन गरेको पाइन्छ । जस्तो ‘सिटिजन लुइस क्यापेट’ । तर रूसमा ‘सिटिजन’ शब्दको प्रयोग बारेमा रूसी क्रान्तिपछि ध्यान दिइएन् ।
सिटिजन शब्दले फ्रान्समा भएजस्तै लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रताको लाई मात्र प्रयोग हुने गरिएको थियो तर बोल्शेभिकहरू सामाजिक र राज्यसंरचनाका आधारमा फरक सामाजिक अवस्थामा थिए ।
लोकतान्त्रिक होइन समाजवादिक थिए । यो फरक थियो ।
समाजवाद जर्मनीमा जन्मियो । पहिला समाजवादीहरूले ‘कमरेड’ एक आपसलाई सम्बोधन गर्न अंगीकार गरे ।
ल्याटिनको क्यामराडाको शाब्दिक अर्थ ‘कोठाको साथी’(चेम्बर मेट ) हुन्छ । विभिन्न भाषा वैज्ञािनक अध्ययनहरूका अनुसार अध्ययनका बेला कोठा साझा गरी बस्नेहरूका लागि यो शब्दको प्रयोग हुन्थ्यो ।
फ्रान्सेली क्रान्ति र १८४८को युरोपेली क्रान्तिहरू पछि ‘कमरेड’ समाजवादिक विचारहरूलाई एक आपसमा हार्दिकतापूर्वक साटासाट गर्न र अझ बढी त्यसका लागि लडन एक आपसमा भेटघाट गर्दा प्रयोग हुने शब्दको रूपमा अगाडि आएको देखियो ।
तर रूसीहरूले यो ‘कमरेड’ शब्द भनेन् । उनीहरूले यसका लागि आफ्नै प्रकारको शब्द प्रयोग गरे‘ तोवारिश’ । यो तोवारिशको अर्थ व्यापारका भाइबन्धु हो ।
रूसी भाषामा तोवारिशको प्रारम्भिक अर्थ मित्र हुँदैन यसको अर्थ व्यवापारका भाइ हो । यो शब्दको मूल ‘तोवार’को अर्थ वस्तु हुन्छ ।
अनि वस्तुहरूको व्यापारमा संलग्न साझेदारको रूपमा तोवारिश भनिन्थ्यो । यो शब्दको प्रयोग सरकारी सेवामा रहेकाहरूलाई सम्बोधनको रूपमा पाइन्छ । १८०२ देखि १९१७ सम्म तोवारिश उपमन्त्रीलाई भनिएको पाइन्छ ।
रूसी क्रान्ति पछि बोल्शेभिकले सत्ता लिएपछि आफ्ना कम्युनिस्टहरूलाई सम्बोधन गर्न तोवारिशलाई अंगीकार गरे ।
लुइस सोह्रोलाई सिटिजन लुइस क्यापेट भनेझै जार निकोलास रोमानोभलाई ‘सिटिजन’ तोवारिश भनिएनन.् ।तोवारिश भन्दा उनीहरूलाई बोल्शेभिकसँग दाँजेर अपमान गर्न खोजिएको अर्थमा लिएर रोमानोभहरूले आफूलाई सिटिजन सम्बोधन गरिन मनपराएको देखियो ।
सोभियत सेना जसमा रुसी, उक्राइनी र बेलारुसी थिए उनीहरूलाई तोवारिश वैधानिक सम्बोधन रहेको देखियो ।
पदको अगाडि तोवारिश लगाउने चलन देखियो । जस्तो क्याप्टेन पेट्रोभलाई तोवारिश क्याप्टेन सम्बोधन गरेको पाइयो ।
यसैगरी तोवारिश वरिष्ठ कर्नल भनेको पाइन्छ । यसैगरी सोभियत संघ भएको कम्युनिस्ट सत्तामा पार्टीका नेताहरूलाई तोवारिश भन्ने चलन थियो । तोविरिश स्टालिन, तोवारिश ब्रेजनेभ भनेजस्तै ।
अब रूसमा सम्बोधनको कुनै शब्द विशेषरूपले निर्धारण गरेको पाइएको छैन् । औपचारिक अवसरमा क्रान्तिपूर्वका शब्द महोदयलाई गोपोदिन र महोदयालाई गोपोझा भनि सम्बोधन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
‘ग्राझदानिन’(सिटिजन) औपचारिक शब्दको रूपमा भनिन्छ । तोवारिश कम प्रयोग गरिन्छ ।परिचय गराउन ‘प्रियातेल’ वा ‘ज्नाकोमियी’ भन्ने गरिन्छ । तोवारिशलाई स्थिति साम्य पार्न सार्वजनिक नम्रताको रूपमा मेट्रो ट्रेन । तर्कवितर्कका बेला प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
शुक्रबार सुनको भाउ प्रतितोला ९०० रुपयाँले घटेर ७४ हजार ६०० रुपैैयाँमा आएको छ
कहिल्यै खुर्सानी नखानेको तुलनामा खानेहरूको शरीरमा हुने शारीरिक गतिविधि अलि फरक र...